Law & Notifications – Myanmar Mission, Geneva
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေ (Myan)
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်း ဥပဒေ (Myan)
နိုင်ငံသားများ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှုနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလုံခြုံမှုကို ကာကွယ်ပေးရေးဥပဒေ (Myan)
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေ (Myan)
နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ (Myan)
ရပ်ကွက် (သို့) ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေကို တတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (Myan)
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေ (Myan)
အရေးပေါ်စီမံမှုအက်ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပဒေ (Myan)
ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခြင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ (Myan)
ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (Myan)
ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ (Myan)
မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေကိုရုပ်သိမ်းသည့်ဥပဒေ (Myan)
ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေကိုရုပ်သိမ်းသည့်ဥပဒေ (Myan)
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ (Myan)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့မဟုတ်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကို စတုတ္ထအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ (Myan)
The Fertilizer Law [State Peace and Development Council Law No. 7/2002] (1-10-2002)
Myanmar Aerospace Engineering Law 2002
The Control of Money Laundering Law (State Peace and Development Council Law No. 6/2002)
The Attorney General Law 2001
The State Budget Law, 1998
State Supplementary Appropriation Law, 1998
The Control of Smoking and Consumption of Tabasco Product Law 5/2006
Order issued by the Ministry of Home Affairs of the Government of the Union of Myanmar under the instruction of the State Peace and Development Council, the Highest Organ of the State to eradicate the practice of force labour in Myanmar
The Directive for all the State and Divisional Development Councils issued by the State Peace and Development Council of the Union of Myanmar, the Higest Organ of the State, regarding the prohibiting reguisition of force labour
State Peace and Development Council’s Proclamation No.5/97
State Peace and Development Council’s Proclamation No.4/97
State Peace and Development Council’s Proclamation No.3/97
State Peace and Development Council’s Proclamation No.2/97
State Peace and Development Council’s Proclamation No.1/97
State Law and Order Restoration Council’s Proclamation No.1/97
State Peace and Development Council’s Notification No.8/97
State Peace and Development Council’s Notification No.3/97
State Peace and Development Council’s Notification No.2/97
State Peace and Development Council’s Notification No.1/97
Ministry of Health Notification No.2/2002( 21 June, 2002)
Ministry of Health Notification No.3/2002( 29 July, 2002)